Ogaden News Agency (ONA) – Shir diiradda lagu saarayo xasuuqa ka socda Ogadenya
Shir diiradda lagu saarayo xasuuqa ka socda Ogadenya
Posted by ONA Admin	/ February 25, 2012
Jaaliyadda Somalida Ogadenya iyo haya’adaha mujtamaca madaniga ayaa loogu baaqayaa inay ka soo qaybgalaan maalinta Axadda ah shir taageero oo looga hadli doono xasuuqa qarsoon ee ka socda dalka Ogadenya ee bariga Itobiya. Waxaa munaasabadda lagu xusi doonaa oo kale Maalinta Xasuuqa Ogadenya oo dhamaan jaaliyadaha Ogadenya laga xusay. Waxaa shirkan soo qaban-qaabiyay Jaaliyadda Somalida Ogadenya (JOKA), Midowga Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenya (OYSU), iyo ururka Isu-tagga Somalida Koonfur Afrika (SASA).
Maareeyaha ururka SASA, mudane Maxamad Adan ayaa ku baaqay in shirka ahmiyadiisa ay sii siyaadisay hadda xasuuqii 12-20kii bishan Feb. ka dhacay Gunagado ee 35ka shacabka ah lagu laayay. Dad shacab ah oon waxba galabsan ayay ciidamada Meles Zinawi xasuuqeen ayuu yidhi mudane M. Adan. Isagoo raciyay; “ Waa mawjad horleh oo dadweynaha lagu laynayo iyadoo saxaafadda caalamka aan loo ogolayn inay galaan Ogadenya arimaha ka socda darteed. Waa xaalad bani-aadamnimo, ujeedada shirka waa inaan caalamka ku soo jeedinaa dilka ay Itobiya ka wado halkaa.”
Shacabka Ogadenya ayaa gobanimadiisa u dagaalamaya iyadoo uu R/W Itobiya Meles uu ku hayo dil, afduub, iyo kufsi dadka shacabka ah een waxba galabsan. Mr. Adan oo ah maareeyaha SASA wuxuu sheegay inuu caalamka ka indha dadbay dagaalka ka socda Ogadenya. Waxaa shirka la soo hordhigi doonaa si maqal iyo maqaal ah dadkii ay dawladda Itobiya dhibaatada ugu gaysatay Ogadenya. Wuxuuna ugu baaqay maxamad Adan dhamaan haya’daha inay ka soo qaybgalaan dhacdadan si isbadal loogu ololeeyo inuu ka dhoco gobolkaa.
“Waxaan rajaynaynaa in aan bilowno barnaamij wacyigalin ah anagoo ka raja qabna in ururka sharciga ee Muslim Judicial Council (MJC) uu shirka iman doono. Waxaa kaloon feerin doonaa doorka ay ka qaadan karaan Midowga Afrika (AU) iyo dawladda Koonfur Afrika taageerada qadiyadda shacabka Ogadenya iyo kor-u-qaadida Xuquuqul Insanka gobolka.”
Waxaa shirka lagu qabanayaa goobta Small & Weltevreden Street, Bellville, ee ka soo horjeeda Bellville Post Office maalinta 26ka Febraayo 5ta galabnimo. Wixii faahfaahin dheeraad ah waxaad kala xidhiidhi kartaa;
Mohamed Aden teleefoonka 0721980051 ama cinwaanka ah; xadiis80@hotmail.com.